जीवन भुजेलले उपचारको रकम तिर्न नसक्दा विराटनगर अस्पतालमै बन्धक (भिडियो) – Halkhabar kura
१७ पुष २०७६, बिहीबार १८:४२
जीवन भुजेलले उपचारको रकम तिर्न नसक्दा विराटनगर अस्पतालमै बन्धक (भिडियो)
संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका -१० का २० वर्षीय जीवन भुजेल मोरङको विराटनगर अस्पतालमा बन्धक भएका छन् । उपचार गरेको रकम तिर्न नसक्दा अस्पतालले उनलाई बन्धक बनाएको हो ।
विराटनगरको विराटनगर अस्पताल प्रा.लि.मा उपचार गरेको रकम तिर्न नसक्दा सङ्खुवासभाका जीवन भुजेलसात महिनादेखि बनधकमा छन् । गएको असार पााच गते भोजपुरको इखुवाखोला हाइड्रोपावरमा काम गर्ने मजदुरहरुबीच झगडा भयो । छुट्याउन गएका जीवनको टाउको र घााटीमा गम्भीर चोट लागेपछि अचेत अवस्थामा अस्पताल पुर्‍याइयो । वी. पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई विराटनगर अस्पताल ल्याइएको थियो ।
घाटीमा गहिरो चोट लागेका कारण श्वास फेर्न प्वाल पारेर पाइप हालिएको छ । घााटीको शल्यक्रिया गरेर पुरानै अबस्थामा नफर्काएकाले उनलाई चिकित्सकले बोल्न दिएका छैनन् । तीन महिनाअघि डिस्चार्ज भएपनि उपचार खर्च बुझाउन नसक्दा जीवन अस्पतालमै बन्धक छन् । क्यान्टिनमा खाना खाएको बिल नै ३५ हजार रूपैयाा पुगेको छ । खानाको रकम तिर्न नसक्दा क्यान्टिनले खाना दिन समेत छाडेको छ ।
पूर्वाधार र जनशक्ति अभावमा झापाका बर्थिङ सेन्टर प्रयोगविहीन- झापा जिल्लामा १८ वटा स्वास्थ्य संस्थामा वर्थिङ सेन्टर अर्थात शिशु प्रजनन केन्द्र सञ्चालनमा छन् । तर सवै वर्थिङ सेन्टर प्रवाकारी रुपमा सञ्चालन हुन् सकेका छैनन् । भौतिक पूर्वाधार र दक्ष जनशक्तिको अभावमा सवै रिफर सेन्टरमा परिणत भएका छन् ।
झापाको विर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर ३ विर्ता बजारमा रहेको यो अनारमनी स्वास्थ्य चौकी हो । यस स्वास्थ्य चौकीलाई ३ वर्षअघि वर्थिङ सेन्टर घोषणा गरिएको थियो । तीन वर्षमा प्रसुति गराउन एक जना पनि आएका छैनन् । यस सेन्टर प्रसुतिका लागि आवश्यक औजार र उपकरण त छैनन् दक्ष जनशक्ति समेत छैनन् ।
बुद्धशान्ति गाउापालिकाको शान्तिनगरमा रहेको स्वास्थ्य चौकी वर्थिङ सेन्टरका लागि भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न छ । यहााबाट दुई वर्षमा २७ जनाले मात्र सेवा लिएका छन् । त्यो पनि साधारण प्रसुति गराउन । अनमीको भरमा वर्थिङ सेन्टर छाडेकाले पनि गर्भवती महिलाले विश्वास नगरेका हुन् ।
स्वास्थ्य चौकीको मात्र होइन, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको समेत हालत उस्तै छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ । तै पनि प्रसुति गराउन सुविधाजनक अस्पताल जानेगरेको कर्मचारी नै स्वीकार गर्दछन् ।
शिक्षा जस्तै स्वास्थ्य पनि सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई छ । वर्थिङ सेन्टरलाई भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र दक्ष जनशक्ति ब्यवस्थापन गर्ने जनप्रतिनिधिले भने पनि भनाइ अनुसारको काम हुन भने सकेको छैन ।
सविंधान मै मौलिक हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य निशुल्क प्राप्त गर्ने हक उल्लेख छ । सरकारले वर्थिङ सेन्टर प्रभावकारी नवनाउदाा नागरिक न्यूनतम सुविधाबाटसमेत बञ्चित छन् भने महगों अस्पताल धाउन पनि बाध्य छन् ।
Previous युवराज चौलागाइँको नयाँ गीत ‘मलमल सारी’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
Next यस्तो छ जानकारहरुको धारणा- धर्मसंग राज्य निरपेक्ष रहन्छ या सापेक्ष ? (भिडियोसहित)